उनको हात रूपमा खुट्टा महिला, सावधान मर्मतका र हेरविचार चाहिन्छ। पेडीक्योर राम्रो उपस्थिति अभिन्न भाग हो। कि यो बारेमा र यस लेखमा छलफल गरिनेछ। हामी एक पेडीक्योर लागि केही रोचक विचार हेर्न हुनेछ। पनि प्रक्रिया प्रदर्शन को प्रविधी थाह प्राप्त गर्न सक्छन्।
खुट्टा हेरविचार लागि केबिन
तपाईं एक पेडीक्योर लागि विशिष्ट विचार छैन भने, तपाईंले एक विशेष संस्थाले उल्लेख गर्न सक्छन्। मात्र आफ्नो नङ र एडी ह्यान्डल, तर पनि एउटा सुन्दर डिजाइन बनाउन अनुभव त्यहाँ मास्टर। तर, यस्तो खुशी को लागि केही पैसा तिर्न हुनेछ। एक कवर संग खुट्टा को एक शास्त्रीय उपचार औसत लागत 1,000 rubles देखि खर्च हुनेछ।
तपाईं पनि लागि विचार संग आउन सक्छ घरमा पेडीक्योर। यो नङ कोटिंग आफ्नो खुट्टा को प्रक्रिया गर्न आवश्यक छ पहिले त्यो उल्लेख लायक छ। तपाईं धेरै तरिकामा गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को साधारण कटौती पेडीक्योर, उपकरण सफाई र Exfoliating रचनाहरूको प्रयोग। अधिकांश तपाईं सुहाउने एक चयन गर्नुहोस्। हामीलाई पेडीक्योर लागि केही रोचक विचार विचार गरौं।
सायद यो कहिल्यै फैशन यो डिजाइन बाहिर जान्छ। यो एक उज्ज्वल रंग मा नङ प्लेट को टिप staining समावेश छ। क्लासिक ज्याकेट सेतो छाया सिर्जना गरिएको छ। तथापि, तपाईं आफ्नो दराज वा मुड थप अनुकूल छ कि एक लाग्न सक्छ।
marigolds को सुझाव बन्द फाइल र तिनीहरूलाई नै आकार दिन्छ। को औंलाहरु पातलो ब्रश को मद्दतले "मुस्कान" को सुझाव त्यस तान्ने पछि। धर्काहरू द्वारा त्यसपछि ड्राई, को नङ स्पष्ट वार्निश कवर। तपाईं इच्छित यदि कोटिंग rhinestones वा पर्चा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर, सजावटी तत्व पनि दुष्कर हुँदैन। यसलाई आफ्नो स्थान ठूलो औंला अप चयन गर्न बेहतर छ।
तरिका को गर्मी मा एक पेडीक्योर सबैभन्दा अविश्वसनीय हुन सक्छ। निस्सन्देह, तपाईंले एक रंग कोटिंग लागू गर्न सक्नुहुन्छ, तर, यो एकदम सरल र नीरस छ सहमत हुनुहुन्छ। तपाईं छुट्टी वा छुट्टी मा भने, त्यसपछि एक उज्ज्वल पेडीक्योर समुद्र बनाउन प्रयास गर्नुहोस्।
नरम sandind bafika वा काटन कार्य प्रयोग गरेर प्लेट को सतह align। त्यसपछि धूलो औंलाहरु संग कुल्ला र कोटिंग सुरु गर्नुहोस्। मूल marigolds मा स्ट्रिप्स overcame। तिनीहरूलाई लागि रंग, तपाईंले आफ्नो दराज अनुसार चयन गर्न सक्नुहुन्छ। कील मा एकल रंग कोटिंग लागू र यो सुक्खा गरौं। कि पछि, को ठूलो औंला तेर्सो वा ठाडो धर्काहरू आकर्षित। आफ्नो रंग मुख्य देखि नाटकीय फरक वा केही रंग गाढा हुनुपर्छ। को नीलो र फिरोजा, रातो र पहेंलो, सेतो र कालो आदर्श संयोजन। को नङ को बाँकी एक ठोस रंग ढाकिएको हुनुपर्छ। इच्छित भने, तपाईं वार्निश को रंग वैकल्पिक गर्न सक्नुहुन्छ। तारा वा सेक्विन को रूप मा सजावटी तत्व थप्न। अन्त मा एक सुरक्षा कोटिंग लागू गर्न निश्चित हुन।
एक पेडीक्योर लागि विचार: shellac
यस्तो काम को फोटो लेख मा प्रतिनिधित्व छ। तपाईं जेल आधार चयन गर्दा डिजाइन सिर्जना गर्ने, पूर्व-तयार प्लेट आवश्यक छ। एक नरम नङ फाइल संग Opilio नङ र आधारभूत कवरेज ठाँउ। यो shellac लागू गर्न सम्भव छ।
जस्तै डिजाइन प्रभावशाली र आकर्षक देखिन्छ। यसलाई यसरी गरे पेडीक्योर, पारंपरिक कोटिंग भन्दा धेरै अब लागि प्रसन्न हुनेछ टिप्पण लायक छ। यसलाई पूरा गर्न, तपाईंले पराबैंगनी दीपक आवश्यक हुनेछ। तपाईं जेल वार्निश सुक्खामा आवश्यक जहाँ कि छ। तपाईंलाई आवश्यक भएमा, कुनै पनि सजावटी तत्व थप्न सक्नुहुन्छ। कोटिंग रूपमा लामो तपाईं ड्रायर मा खुट्टा राख्नु छैन रूपमा लागि तरल रहनेछ कि सम्झना, त्यसैले यसलाई मेटाउन सजिलो छ।
रंग मैनीक्योर पन्नी को प्रयोग
नयाँ सिजन मा एक पेडीक्योर लागि विचार पन्नी को उपयोग शामिल छ। यसलाई कुनै पनि सौन्दर्य स्टोरमा खरिद गर्न सकिन्छ। यसको लागि आवेदन, तपाईंलाई एउटा विशेष गोंद आवश्यक हुनेछ। यो तपाईं पूर्ण नङ एक तत्व कवर वा व्यक्तिगत ढाँचाहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ कि टिप्पण लायक छ।
कील मा एक पारदर्शी गोंद ढाँचा लागू हुन्छ। यो शाखा वा फूल हुन सक्छ। यो डिजाइन मात्र ठूलो औंला को प्रयोग गर्नुहोस्। को नङ को बाँकी पूर्ण आधार कवर। पन्नी प्रत्येक पन्जा टुक्रा गर्न संलग्न गर्नुहोस्। एक मिनेट र हात को एक तेज आन्दोलन प्रतीक्षा, को workpiece हटाउन। आफ्नो औंलाहरु मा चयन गरिएको रंग देखिनेछ। कवर एक पेडीक्योर स्पष्ट वार्निश वा फिक्सिंग हालतमा गर्न आवश्यक छ। अन्यथा डिजाइन पानी संग पहिलो सम्पर्क मा बन्द धुन हुनेछ।
अब तपाईं एक पेडीक्योर सिर्जना को विचार को केही थाहा छ। इच्छित भने, तपाईंले आफ्नो छवि गर्न आदर्श हो जो आफ्नो आफ्नै अतिरिक्त तत्व, आविष्कार गर्न सक्नुहुन्छ। झन्, को fairer सेक्स जेल नङ ढाकिएको छ। यो तपाईं तिनीहरूलाई बलियो बनाउन अनुमति दिन्छ। यस प्लेट मा पेडीक्योर (डिजाइन) धेरै लामो पकड हुनेछ। खुट्टा र औंला हेरचाह! र सुन्दर हुन!
सुविधाहरू, रोचक विचार र सिफारिसहरू: छोटो नङ मा छोराछोरीको मैनीक्योर
विवरण र प्रजाति: को नङ र आफ्नो नाम आकृति
कसरी एनिमे केटी आकर्षित गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ?
घरमा माछा को धूम्रपान।
डीजल इन्जिन को नयाँ उपकरण
जनसंख्याको लागि सार्वजनिक सेवाहरूको खपत को अनुपात
"Spongebob" - आफ्नो हातमा एक केटा को लागि एक केक